ငါ၏အ TPS ကုန်ဆုံးလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်? | သငျသညျအဘယျရွေးချယ်မှုထွက်ရှာမည် | USAHello
သင့်ရဲ့ TPS သို့မဟုတ် DED ကုန်ဆုံးနေသည်? အားလုံး TPS နဲ့ DED အစီအစဉ်များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် updates များကို Read. သင့်ရဲ့နိုင်ငံ၏ TPS အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာပါ. TPS ကုန်ဆုံးပြီးနောက်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
A new bill passed in the US Senate. It gives Liberians in the USA with DED status access to permanent residency andapath to citizenship. အဆိုပါကိုသွားပါ DED Liberia page for details.
Update ကိုနိုဝင်ဘာလ 4, 2019
TPS for အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ, ဟေတီ, ဟွန်ဒူးရပ်စ်, နီပေါ, နီကာရာဂွာ, နှင့် ဆူဒန်, has been extended.
The US government publishedanotice in the Federal Register. The notice says that TPS for El Salvador, ဟေတီ, နီကာရာဂွာ, ဆူဒန်, Honduras and Nepal is extended until TPS court cases have been settled.
If you have TPS for El Salvador, ဟေတီ, ဟွန်ဒူးရပ်စ်, နီပေါ, နီကာရာဂွာ, or Sudan, your TPS documents are automatically extended to January 4, 2021.
သင်ဖတ်လို့ရပါတယ် more details and analysis from CLINIC.
1) TPS အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ has been extended, according toaအစိုးရကြေညာချက်.
Update ကိုသြဂုတ်လ 1, 2019: TPS ဆီးရီးယား များအတွက်တိုးချဲ့ထားပြီး 18 လများ.
Today the Department of Homeland Security extended TPS Syria for eighteen months from September 30, 2019. See TPS ဆီးရီးယား for more details.
Update June 2019: အဆိုပါသည် CAM အစီအစဉ်တွင်ကလေးငယ်များနှင့်အတူမိဘများကိုအမေရိကန်အစိုးရကနေစာတစ်စောင်ရသင့်တယ်.
သငျသညျဟွန်ဒူးရပ်စ်ထဲကနေ Are, အယ်လ်ဆာဗေးဒေါနှင့်ဂွာတီမာလာနှင့်ဗဟိုအမေရိကန်အရွယ်မရောက်သေးသူများအားအစီအစဉ်သင့် application ခဲ့သည် (သည် CAM) တွေနဲ့အတည်ပြု? သငျသညျဆဲ USA တွင်ဥပဒေရေးရာ status ကိုရှိသည် Do? အစိုးရကအတည်ပြုလိုက်သည် CAM applications များကို process မှ စတင်. နေသည်. အစိုးရကစေလွှတ် ဤကဲ့သို့သောစာတစ်စောင် တွေနဲ့ CAM ဘို့အတည်ပြုသူမိဘနှစ်ပါးမှ. သင်နေဆဲအရည်အချင်းပြည့်မှီခြင်းနှင့်စာတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိကြပြီမဟုတ်ယုံကြည်ပါ, IRAP သင်ကူညီနိုင်ပါတယ်. ဖတ် IRAP များအတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်သွယ် IRAP ထံမှသည် CAM အကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်နှင့်တွေ့ပါ.
ယူအက်စ်အေ: +1 (917) 410-7546 • El Salvador: +503 2113 3539
Update May 2019: အစိုးရကမေလအတွက်နီပေါ TPS နှင့်ဟွန်ဒူးရပ်စ် TPS အကွောငျးဘာကိုကြေညာခဲ့ပါ 2019?
အစိုးရကထုတ်ပေး မေလပေါ်တွင်သစ်ကိုကြေညာ 10, 2019. အစိုးရကပြောပါတယ်, “နီပေါနှင့်ဟွန်ဒူးရပ်စ်များအတွက် TPS ပုံစံအောက်တွင်အကျိုးခံစားခွင့်ဟာသူတို့ရဲ့ TPS ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ပါလိမ့်မယ်, တစ်ဦးချင်းရဲ့အ TPS status ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရည်အချင်းမပြည့်မှီ၏ဆုတ်ခွာမပေးကြောင်းဖြစ်သည်။” ဤသည်ကြေငြာချက်ကြောင့်တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်သည်.
Update April 2019: ဟွန်ဒူးရပ်စ်အနေဖြင့် TPS ကိုင်ဆောင်သူအမြိုးသားတို့အကြောင်းကိုသတင်းများ, El Salvador and of people from Guatemala
ဧပြီလ 12, 2019: တစ်ဦးကအမေရိကန်တရားရုံးအမေရိကန်အစိုးရဗဟိုအမေရိကန်အရွယ်မရောက်သေးသူများအားအစီအစဉ်အောက်ရှိယူအက်စ်အေလာရန်အတည်ပြုလိုက်သောကလေးများကို process ရမယ်ပြောပါတယ်. သားတို့သည်မိမိတို့မိဘများ join ဖို့လာမယ့်ခဲ့သည်, many of whom are TPS holders from Honduras and El Salvador. ဒါပေမယ့်အစီအစဉ်တွင်အစိုးရကပိတ်ပစ်ခဲ့သည် 2017, လုနီးပါး 2,700 ကလေးတွေလာမယ့်အနေဖြင့်ရပ်တန့်ခဲ့ကြ. တရားရုံးအမိန့်ကိုသာအစီအစဉ်တွင်ပြီးသားဖြစ်နှင့်သောကလေးများနှင့်သက်ဆိုင်. အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်မဆိုအသစ်အပလီကေးရှင်းကိုယူပြီးမဟုတ်ပါ.
Update March 2019: လိုင်ဘေးရီးယားအဘို့အ DED ပတ်သက်. နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းဆိုတာဘာလဲ?
မတ်လ 28, 2019: အမေရိကန်အစိုးရရက်ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်းပြဌာန်းထွက်ခွာကြေညာလိုက်ပါတယ် (DED) လိုင်ဘေးရီးယားကနေလူများအတွက်မတ်လသည်အထိတိုးချဲ့ထားပြီး 30, 2020.
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2019: အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန TPS ယာယီလေးနိုင်ငံများအတွက်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်ဟုဆိုသည်. အယ်လ်ဆာဗေးဒေါထံမှ TPS ကိုင်ဆောင်သူ, ဟေတီ, ဆူဒန်နှင့်နီကာရာဂွာဇန်နဝါရီလမှအလိုအလျောက် extension ကိုရကြလိမ့်မည် 2020. အဆိုပါ extension ကိုလည်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်ပြုချက်စာရွက်စာတမ်းများသက်ဆိုင်. အဆိုပါ DHS အသိပေးစာ Read.
မတ်လ 8, 2019: အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန TPS တောင်ဆူဒန်များအတွက်တိုးချဲ့ခဲ့ဟုဆိုသည်. တောင်ဆူဒန် ပတ်သက်. DHS အသိပေးစာ Read.
မတ်လ 12, 2019: အစိုးရကဟွန်ဒူးရပ်စ်နှင့်နီပေါများအတွက် TPS ၏အဆုံးနှောင့်နှေးဖို့သဘောတူ. နောက်ထပ်အသိပေးစာပေးထားသည်တိုင်အောင်ထိုအနှစ်နိုင်ငံအဘို့အ TPS ကိုအဆုံးသတ်မည်မဟုတ်. နောက်ဆုံးရက်စွဲကိုတရားရုံးအမှု၏ရလဒ်ပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်. တရားရုံးအမှုရလဒ် TPS ကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါလျှင်, နီပေါနှင့်ဟွန်ဒူးရပ်စ် TPS ကိုင်ဆောင်သူနေဆဲမှာအနည်းဆုံးရှိပါလိမ့်မယ် 120 အမိန့်ပေးတော်မူပြီးနောက်စွန့်ခွာရန်ရက်ပေါင်း. ငါတို့ကဲ့သို့မကြာမီကျနော်တို့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရှိသည်အဖြစ်ဒီစာမျက်နှာကို update ပါလိမ့်မယ်. သင်တို့သည်လည်းကြေညာချက်များအတွက် USCIS က်ဘ်ဆိုက်စစျဆေးနိုငျ. ဤနေရာတွင်ဟွန်ဒူးရပ်စ်နှင့်နီပေါနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်သစ်ကို USCIS ကြေညာချက်များအဘို့အ Check.
ငါ၏အ TPS ဖို့ဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့?
တွင် 2017, အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့် TPS အစီအစဉ်ကိုတဖြည်းဖြည်းအဆုံးသတ်ကြောင်းဆိုပါတယ်. TPS နဲ့ DED ကုန်ဆုံး (ကြီးစွန်း) ကွဲပြားခြားနားသောရက်စွဲများအပေါ်လူများအတွက်. ဤအရက်စွဲများ၏အချို့ကြောင့်သေးဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ရသေးကြောင်းတရားရုံးအမှုတဖန်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်.
တိုင်းပြည်နှင့်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုများအကြောင်းကို TPS များအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ကတိုင်းပြည်အမည်များကို click ပေးပါ. အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်အင်္ဂလိပ်၌တည်ရှိ၏နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားသို့ပြန်ဆို.
တောင်ဆူဒန်များအတွက် TPS နိုဝင်ဘာလအပေါ်ကုန်ဆုံး 2, 2020.
သငျသညျအထကျနိုငျငံမြား၏တဦးတည်းအနေဖြင့်တစ်ဦး TPS ကိုင်ဆောင်သူရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ကာကွယ်မှုအထက်တွင်ပြရက်စွဲများအပေါ်အဆုံးသတ်မည်. ဒါဟာသင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသင့်ရဲ့ status ကိုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်စွန့်ခွာရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ်. သင်တို့သည်အလျှင်းမပြုလျှင်, သငျသညျတခုအထောက်အထားမဲ့လူဝင်မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်. သငျသညျဖမ်းဆီးပြန်ပို့ခံရအန္တာရာယ်ပါလိမ့်မယ်.
ငါ၏အ TPS ကုန်ဆုံးလျှင်ယခုတွင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုသင့်တယ်?
1) ကြောင်းအထက်ပါစာမျက်နှာ Read သင့်ရဲ့နိုင်ငံ၏ TPS သို့မဟုတ် DED အကြောင်း.
2) သင်တို့သည်လည်းသေချာသင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးကြသည်ဖြစ်စေအွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်များဖတ်ရှုနိုင်သည်.
4) အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်များပိုမို Read:
ယာယီကာကွယ်မှုအခြေအနေအပေါ်အုပ်ချုပ်ရေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၏အဓိပ္ပာယ် Making: အင်္ဂလိပ် TPS ကိုင်ဆောင်သူတစ်ဦးအမြန်လမ်းညွှန်, စပိန်နှင့်အီ Creole အဘိဓါန်
အကြောင်းကြားပြောင်းရွှေ့လာသောလူ TPS အရင်းအမြစ်များကို
အဘယ်သူ၏ TPS သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါလိမ့်မယ် TPS နဲ့လူတို့နှင့်အတူလူများအတွက်ညှိနှိုင်းမှုအခွင့်အလမ်းများ
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့်အတူကူညီကြောင်းကိုသင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FindHello ဒေတာဘေ့စကိုအသုံး ကျေးဇူးပြု..
အဆိုပါအကြောင်းကြားပြောင်းရွှေ့လာသောလူဒေတာဘေ့စလည်းအဖွဲ့အစည်းများရာပေါင်းများစွာ lists, နိုင်ငံတော်ကပြည်နယ်, ကြောင်းအကူအညီနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ.
TPS လုံခြုံစွာသူတို့ရဲ့ဇာတိမြေပြန်မသွားနိုင်သူကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကလူတွေမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကမ်းလှမ်း. ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပဋိပက္ခ၏သို့မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၏ဖြစ်နိုင်သည်. TPS ရုံတစ်ဆယ်နိုင်ငံများမှလူအခြို့သက်ဆိုင်.
TPS လူတွေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်နှင့်တရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ကဒ်မပေးပါဘူး. TPS ကိုင်ဆောင်သူသည်အနည်းဆုံးခြောက်လနေဖို့နိုင်ပါတယ်. တချို့က TPS ကိုင်ဆောင်သူထက်ပိုဆယ်နှစ်နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီ.
ဓာတ်ပုံ: ဟယ်လင် Parshall / Capital ကိုသတင်းဝန်ဆောင်မှု
အဆိုပါ Interfaith လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးညွန့်ပေါင်း (IIC) အားလုံးအသစ်ရောက်ရှိလာသောနှင့်ရယူထားသောကြိုဆိုကြောင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှကျူးလွန်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၏မိတ်ဖက်ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအားလုံးလူသားတွေဖြစ်တယ်. ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များရုံနှင့်သာတူညီမျှလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒများအဘို့ထောက်ခံမှအတူတကွလုပ်ဆောင်, ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းပညာပေး, နှင့်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းလူဝင်မှုလူဦးရေအစေခံ.
အဆိုပါ Go IIC က်ဘ်ဆိုက် သငျသညျ TPS ခုခံကာကွယ်ကူညီရန်အရေးယူနိုင်ပါတယ်နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေ. သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှား TPS ကိုင်ဆောင်သူကိုကူညီနိုငျ.
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိအချက်အလက်တွေကနေကြွလာ အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန, အဆိုပါ ဖက်ဒရယ်မှတ်ပုံတင်မည်, USCIS နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.